Toxoplasmosis - Ihe ize ndụ, igbochi na ihe ịrịba ama nke ọrịa ahụ
Toxoplasmosis | Ngwongwo anu anu ulo
Kedu ka toxoplasmosis si egosi na pusi
Kedu ka toxoplasmosis si egosi mmadụ
Toxoplasmosis dị ize ndụ n'ime ime
Mgbochi nke toxoplasmosis
Toxoplasmosis bụ ọrịa na-efe efe kachasị atụ egwu nke ndị nwe ụlọ nwere ime. N'ihi na ọrịa ahụ maka ọrịa ahụ, nke na-akpọ aha Toxoplasma gondii, na-emetụta anụ anụ ụlọ na ọrịa dị iche iche. N'ime ọrịa ahụ, ọ pụkwara ibute ụmụ mmadụ. Maka ndị inyom dị ime na ụmụ ha bu n'afọ, maka ndị nwere usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, maka ụmụ ọhụrụ, ndị na-eto eto na ndị agadi, nke a na-anọchite anya nnukwu ahụike ahụike n'ihi na mmetụta ụda nwere ike ime.
Mmepe nke toxoplasmosis pathogen Toxoplasma gondii
Toxoplasma gondii bụ parasite zuru ụwa ọnụ nke pụrụ ịba ụba na ụzọ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, nnyefe ozugbo site n'otu njedebe na-agakwuru onye ọzọ nwere ike ime.
Ozi gbasara toxoplasmosis
Nke a bụkarị pusi. Ọ bụrụ na anụ nwere ọrịa oria a na-ebute site na feeds sprouted ocysts, ndị nwamba ndị ọzọ nwere ike iburu ya.
N'oge usoro ọgwụ ahụ, a tọhapụrụ ndị sporozoite na-adịghị arụ ọrụ n'oge ahụ, bụ nke na-agafe na mgbidi mgba, wee banye ọbara ma ọ bụ lymph ma na-ebugharị ya na akụkụ ahụ dị iche iche na anụ ahụ.
N'ebe ahụ, sporozoites n'ime mkpụrụ ndụ nke mkpụrụ ndụ ahụ nwere ike ịmalite ịmụ nwa oge. Ụdị Trophozoite. Ebe ọ bụ na ọrịa ahụ na-emetụta ndị na-awakpo ahụ ngwa ngwa, ọ na-emepụta ọgwụ ndị na-eme ka nzụlite nke ikuku na-eme ka ọrịa ahụ ghara ịmalite. N'ime mkpụrụ osisi ndị a, Otú ọ dị, germs na-amụba ọzọ. A na-akpọ ha sporozoites ugbu a.
"Ụzọ" nke toxoplasmosis pathogen
Mgbe ihe gbasara ụbọchị 18, sporozoites gaghachi n'ime eriri afọ ma mụbaa ngwa ngwa. A na-ekpuchi akụkụ nke pathogen ọhụrụ na ọgwụ na-eme ka ọ bụrụ nke a na-achọpụta. Nke a dị maka ndị agha ọhụrụ.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na onye na-elekọta ndị ọbịa na-emetụta usoro ahụ, nke a bụ nje germs, nke na-eburu ya cat. Ụzọ ọzọ nke mmepe mmepe ahụ yiri nke a na-akpọzi okirikiri. Ọzọkwa, ingestion nke mmiri ruru unyi nwere ike ime ka pusi ghọọ nje.
Nhọrọ nke atọ nke contagion bụ ngọngọ n'etiti etiti. N'ebe a, ịnyefee germs site na onye na-abata n'etiti ndị ọzọ na-ewere ọnọdụ. Enwere ike ime nke a, dịka ọmụmaatụ, site na iri anụ anụ na Toxoplasma gondii. O nwekwara ike ịfefe nne germs site na nne cake na nwa e bu n'afọ.
Ọ bụghị nkata niile nwere oria na Toxoplasma gondii mepee toxoplasmosis. Kama nke ahụ, ọ na-adabere na nke ahụ ka e were germs.
Ọ bụrụ na ọrịa ahụ dị na njedebe ikpeazụ nke njedebe-ọgwụgwụ, ọrịa ahụ ga-apụ n'ihe dịka 16 pasent nke ụmụ anụmanụ. Ọ bụrụ na ndị germs abanye n'ime ahụ site na mgbanaka n'etiti njedebe-endwirt, ọ dịkarịa ala, pasent 97 nke nwamba ahụ na-arịa ọrịa.
A cat dị ka Pita
Ọtụtụ mgbe, ọ dịghị ọrịa ọ bụla nwere ike ịhụ na ọ bụ nwamba ndị ọrịa. Ọ dị ntakịrị na ọ bụ naanị n'oge usoro mgbasa nke germs na eriri afọ nwere ike ịsị afọ ọsịsa na / ma ọ bụ vomiting ime.
Ọ bụrụ na emetụta akụkụ ahụ dị n'ime, ụkwara, ọkpụkpụ agba, mkpụmkpụ ume ume, ọgba ma ọ bụ ọrịa ọgbụgba ma ọ bụ jaundice nwere ike ịdabere na etu ọrịa ahụ. Ọ bụrụ na ọrịa, ndị na-adịghị ike na ụmụ anụmanụ na-eto eto wakporo, ọrịa ahụ nwere ike ịnwụ.
Ozugbo emeriwo ọrịa ahụ, nwamba na-ejikọtaghị na toxoplasmosis pathogens n'oge ndụ ha niile. Naanị ụmụ anụmanụ na-adịghị ike nwere ike ịghọ ọrịa na-adịghị ala ala.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa niile toxoplasmosis na ụmụ mmadụ bụ ihe mgbaàmà-n'efu. Ka o sina dị, ọrịa ahụ nwere ike ime na nkwụsị ma gbapụ naanị ọnwa ma ọ bụ afọ mgbe e mesịrị. Naanị 10 pasent nke ndị emetụtara ozugbo na-egosi ihe mgbaàmà. Ndị a nwere ike ịbụ obere ahụ ọkụ, isi ọwụwa na ọnyá ahụ ma ọ bụ ọnyá lymph ọnụ. A naghị achọ ọgwụgwọ ọrịa ahụ ma ọ bụrụ na ndị ahụike adịghị mma.
Ọ bụrụ na akụkụ ahụ adịghị ike, ọ nwere ike ibute mmebi ahụ dị iche iche. Ihe na-emetụta bụ ụbụrụ mgbe nile, ka ọ bụrụ nke a, nrịanrịa ma ọ bụ mgbanwe mmadụ nwere ike ime. O nwekwara ike ịbụ nsị ma ọ bụ meningitis, nke nwere ike ịnwe ndụ. Otu ihe a gbasara ụmụaka, ụmụaka na ndị agadi. Ya mere, a na-egosi ọgwụgwọ ndị a.
Ụmụ nwanyị ndị nweworo ọgwụ toxoplasmosis nwere nje ndị na-emegide ọrịa ahụ. Ma ọ bụghị ya, ọrịa ahụ dị ize ndụ, karịsịa na nke abụọ ụzọ n'ụzọ atọ nke ime ime, dịka ọ pụrụ iduga na nsogbu na oke mbibi nwa a na-amụbeghị amụ.
Dịka ọmụmaatụ, obi, ọkụ ma ọ bụ ụbụrụ nwere ike ime. A na-achọ ọgwụgwọ nke nne na-ebute ngwa ngwa na-achọ ngwa ngwa ka e nwee ike ịchọta ihe ga-esi na ya pụta. A na-eme nke a site na usoro ọgwụgwọ a na-atụ anya ya ruo ogologo oge ruo mgbe ọ ga-eme ime.
Iji mee ka ihe ize ndụ nke ibute ọrịa belata, a ghaghị izere oriri nke anụ na anụ ọkụkụ. Ndị na-ere ahịa na Cat kwesịrị ilekọta na ụmụ anụmanụ enweghị ohere ịnweta nsogbu. Idebe nhicha ọ bụla na-ekpochi ya na mkpofu na-adịghị emerụ ahụ ga-eme ka ọhụụ ọ bụla na-akwụsị.
Mgbe ọ na-abịa ịkwado nwamba, ị ghaghị ileba anya na mkpokọta. Nke a na-agụnye nchịkọta mgbe nile nke ebe ụra cat na gburugburu ya. Tụkwasị na nke ahụ, nwamba ekwesịghị ịnweta nri. Mgbe ị gbanye anụ ahụ ọkụ, ịsa aka gị dị mkpa. E kwesịghị ikwe ka nwamba na-ehi ụra na akwa ndị nwe ha. Karịsịa ụmụ kwesịrị ịkụziri ụkpụrụ omume ndị a n'oge ọ bụla o kwere omume.
Iberibe ibe nwamba